यसरी शूट भएको रहेछ ‘हेट स्टोरी - ४’ सबैभन्दा बोल्ड हट गीतको भिडियो !!!
यसरी शूट भएको रहेछ ‘हेट स्टोरी – ४’ सबैभन्दा बोल्ड हट गीतको भिडियो !!!
फागुन २२, २०७४ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ : – उर्वशी राउटेल यी दिनहरुमा आफ्नो आगामी फिल्म ‘हेट स्टोरी – ४’ को कारण चर्चामा छाएकी छिन्। आउँदो ९ मार्चको दिन प्रदर्शनमा आउने ‘हेट स्टोरी – ४’ बोल्ड, रिवेन्ज ड्रामा फिल्म हो। हालै यस फिल्मको गीत ‘बदनामियां’ सार्वजनिक भएको थियो। गीतमा उर्वशी राउटेल र करण वाहीको केमेस्ट्री देख्न सकिन्छ। अहिले यस गीतको बिहाइन्ड द सिन भिडियो सार्वजनिक भएको छ।
उक्त भिडियोमा यस रोमान्टिक गीतको कसरी शूट गरिएको भनी देखाईएको छ। फिल्मको निर्देशक विशाल पाण्ड्यले यस भिडियोमा गीतको विशेषतालाई पनि उल्लेख गरेका छन्। बदनामियां गीतलाई युट्युबमा अहिलेसम्म करिब १३ मिलियन पटक हेरिसकेको छ। यस उक्त गीतको बोल ‘बदनामियां’ हो। यो गीत रश्मि विराग लेखेका हुन् भने अरमान मलिकले यस गीतलाई स्वर दिएका हुन्। यस गीतलाई सङ्गीत अभिजीत भगानीले दिएका हुन्।
केवल यति मात्र हैन यस फिल्मको ट्रेलर रिलिज भएपछि उर्वशीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको थियो। यो धम्की फिल्ममा उर्वशीले आफ्नो तुलना द्रौपदीसँग गरेको कारण मिलेको थियो।
‘हेट स्टोरी-४’ मा प्रमुख भूमिकामा उर्वशी राउटेल, विवियन भटेना र करण वाही जस्ता कलाकारहरु छन्। यसको अतिरिक्त, फिल्ममा इहाना ढिल्लोन र गुलशन ग्रोवर पनि देखा पर्नेछ। यो फिल्म ९ मार्चको दिन सिनेमाघरहरुमा रिलिज हुनेछ। पहिले यो फिल्म २ मार्चको रिलिज हुने तय भएको थियो तर पछि यो फिल्मको रिलिज डेट धकेलिएको हो। एजेन्सी
बिहाइन्ड द सिन भिडियो:-
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन २२, २०७४१३:२५
लामो समय पछिको कम व्याक निताको के हुन्छ त अब करियर